Indlu yentaba eqhelekileyo eneziko
Uphawu lwendlu yeentaba eneenqwelo zokuthwala, izitena eziveziweyo, imigangatho ye-terracotta kunye ne-parquet. Kwiziko lembali lelali yobuhle obunqabileyo, indlela enkulu, impahla elula kwaye ekhululekile inika indlu umoya wamanye amaxesha. 5 km ukusuka Dam di Tivo Ski, yinto isiseko esihle zeehambo zonke iindidi zombini emahlathini ajikelezileyo amadlelo, kwakunye kwi Gran Sasso, Corno Piccolo, i Calderone glacier kunye nezinye iincopho.!
Indawo yokulala ibekwe kumanqanaba amathathu. Ungena ngqo kwigumbi lokuhlala, elinyuswe ngaphezulu kwendlela, ngezitepsi ezine zamatye eziphakamileyo kancinci kunesiqhelo. Ecaleni kwegumbi lokuhlala kukho ikhitshi enezinto zonke ezincedisayo, kuquka i-oven kunye ne-dishwasher.Impahla ilula kakhulu. 'Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela elifikelelwa ngezinyuko zakudala. Igumbi ngalinye linendawo yezitena eveziweyo, enekhareji yesakhiwo sesibhakabhaka. Indawo yomlilo indala kodwa inothuli kwaye inika igumbi imbonakalo yamandulo kunye ne-shabby kunye nelitye lendalo okanye amanyathelo ezitena. Amanye amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela likumgangatho ophezulu ofikelelwa sisitepsi esinezinyuko eziphakamileyo. Ukufikelela kumagumbi akumgangatho ophezulu kulungiselelwe KUPHELA kwaye kulungiselelwe abantu abaninzi abangaphezu kwaBATHATHU. INDLU AYIBALUNGELELI ABANTWANA abangaphantsi kweminyaka emi-5 ubudala
Ubuhle beendlela, izakhiwo, ingxolo yeengxangxasi, i-panorama, ukuzola kuyisipho sale lali kubakhenkethi. Kwilali kukho iindawo zokutyela ezimbini apho ungatya kakuhle kunye nevenkile encinci apho unokuthenga khona okuyimfuneko kwaye ihlala ivuliwe.
Kuphela ukungena kunye nokuphuma. Siyafumaneka ukubonelela ngolwazi ngohambo kunye neemephu zomzila kunye nayo nayiphi na enye into undwendwe olunokuyidinga
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pietracamela, Abruzzo, IT